Ny iPad vaovao ho an'ny taona 2019 avy amin'ny Apple dia antsoina hoe: iPad Air sy iPad mini | Vaovao momba ny gadget
Matetika Apple havaozina ireo fitaovana izay ao anatin'ny laharana iPad indroa isan-taona. Voalohany amin'ny volana martsa, izay manavao ny iPad fototra, hiantsoana azy amin'ny fomba vitsivitsy ary amin'ny volana oktobra, volana natokana ho an'ny fampisehoana ny laharana iPad Pro. Na izany aza, toa tsy misy fampisehoana iray fotsiny amin'ity taona ity.
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nanavao ny tranokala tamin'ny fanitarana ny elanelan'ny iPad, manavao ireo maodely efa nisy ary manafoana ny hafa. Ny zava-baovao dia hita amin'ny maodely vaovao, ny iPad Air, iPad iray mipetraka eo anelanelan'ny iPad Pro 11-inch sy iPad 2018.
Saingy tsy ny iPad Air irery no nohavaozina taorian'ny fanavaozana farany ny tranokala Apple, nanomboka tamin'ny iPad mini dia nahazo vintana ihany koa, izay mety ho ny farany, manavao ny singa anatiny rehetra ary manampy ny mifanentana amin'ny Apple Pencil.
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny iPad Air, Nesorin'i Apple avy amin'ny katalaoginy ny iPad Pro 10,5-inch, ny iPad kely voalohany nahatratra ny tsena tamin'ny Oktobra 2017 ary nanohy namidy ho iPad teti-bola ao amin'ny faritra Pro. Ny fitazonana ny iPad Pro 10,5-inch tsy misy dikany, satria ny iPad Air vaovao dia mahery vaika kokoa izy ity, toy ny ary koa ho mora vidy kokoa.
Ny iPad iray hafa izay nitranga tamin'ny trano fanatobiana Apple koa dia ny iPad mini 4, ny iPad tranainy indrindra izay amidin'i Apple hatrany Ary mbola tsy nohavaozina efa ho 4 taona izao, ity maodely ity no safidy farany ambany indrindra takiana amin'ny fividianany na amin'ny tombony na amin'ny vidiny.
1.1 Volavola Conservative
1.2 Fizarana sary
1.3 Vidin'ny iPad Air vaovao
2.1 Fampisehoana farany ambony
2.2 Volavola tokony ho nihatsara
2.3 Vidiny mini IPad
3 Ankehitriny ny iPad rehetra mifanentana amin'ny Apple Pencil
Ny iPad Air vaovao dia tantanan'ny A12 Bionic, ilay mpikirakira izay hitantsika ao amin'ny laharana iPhone 2018, izany hoe ny iPhone XS, iPhone XS Max ary ny iPhone XR, noho izany hanana iPad mandritra ny taona maro isika. Ho fanampin'izay, amin'ny resaka RAM, hitantsika fa mahatratra 3 GB ity, ny habetsany hitantsika ao amin'ny iPhone XR, iray GB latsaky ny maodelin'ny iPhone XS sy iPhone XS Max.
Ny processeur A12 Bionic, mamela antsika hanova horonantsary amin'ny kalitao 4k nefa tsy hanakorontana, ankafizo ny zava-misy nampitomboina, ny maodely 3D famolavolana ary koa ny fampiasana fampiharana samihafa miaraka amin'ny fividianana Split View, tsy misy fanjifana bateria an'ny fitaovantsika mijaly amin'ny fotoana rehetra.
Nahatratra 10,5 santimetatra ny efijery ary mifanaraka amin'ny Apple Pencil, kojakoja tokony hividianantsika tsy miankina. Ny efijery dia mifanaraka amin'ny teknolojia True Tone, izay ahafahantsika mankafy ny atiny aseho eo amin'ny efijery amin'ny toe-javatra rehetra, na eo amoron-dranomasina na amin'ny labozia.
Ny famolavolana ny iPad Air vaovao dia mitovy amin'ny hita ao amin'ny iPad Pro 10,5-inch, maodely misy zana-kazo mihena, ny lafiny roa sy ny ambany ary ny ambony raha oharina amin'ny maodely 9,7-inch. 61 mm ny hateviny ary milanja 500 grama ny lanjany.
Hiarovana ny iPad, Apple tsy nampiditra ny teknolojia Face ID, izay tokony hidika fiakaran'ny vidiny, ary amin'izao fotoana izao dia mitohy miankina amin'ny sensor sensor amin'ny rindran-tànana amin'ny bokotra an-trano
Na dia eo aza ny zava-misy fa mahazatra kokoa ny mahita hoe firy no mampiasa ny iPad rehefa mandeha mitahiry fahatsiarovana izy ireo Toa tsy nandinika tsara an'ity fizarana ity i Apple amin'ny iPad Air. Ny fakan-tsary any aoriana dia manome antsika vahaolana 8 mpx raha ny eo aloha, ho an'ny selfie na antso an-tsary dia mahatratra 7 mpx.
Vidin'ny iPad Air vaovao
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, ity iPad vaovao ity dia eo anelanelan'ny iPad Pro 11-inch sy iPad 2018, na amin'ny fahombiazana na amin'ny vidiny. Ny vidin'ny ny kinova mora indrindra amin'ny iPad Air dia 549 euro ho an'ny kinova 64GB misy fifandraisana Wi-Fi.
Betsaka ny tsaho niely momba ny fanavaozana ny mini iPad na ny fanafoanana tanteraka ny katalaogin'i Apple. Ny iPad mini se lasa fitaovana taloha Miaraka amin'ny vidiny lafo loatra ho an'ireo tombontsoa natolotray izany.
Toa izany ny zazalahy Cupertino nomen'izy ireo fotoana farany ity fitaovana ity manampy ny processeur matanjaka indrindra izay ananan'ny orinasa amin'izao fotoana izao, nefa tsy manana ny kinova ho an'ny iPad Pro ankoatry ny manampy fampifanarahana amin'ny Apple Pencil.
Fampisehoana farany ambony
Rehefa manavao ny mini iPad, raha te hanohy mitazona an'ity efijery ity ao amin'ny faritra iPad izy, dia tsy maintsy nanavao ny processeur tamin'ny fampidirana ny A12 Bionic, ilay mpikirakira izay hitantsika ao amin'ny laharana iPhone 2018 ihany, izany ny iPhone XS, iPhone XS Max ary ny iPhone XR.
Mba hahatonga ny fitantanana ny processeur ho malama araka izay tratra, fitaovana fahatsiarovana dia 3GB, ny habetsaky ny fahatsiarovana izay mety ho hitantsika na amin'ny iPad Air na amin'ny iPhone XR, izay iray GB latsaky ny azontsika jerena amin'ny iPad Pro sy ny iPhone XS ary ny iPhone XS Max.
Mifanaraka amin'ny Apple Pencil miaraka amin'ny habeny, mahatonga ny fitaovanao ho notepad mety indrindra Miara-mitondra amintsika foana, satria amin'ny tanantsika iray dia azontsika atao ny mitazona azy, fa amin'ny iray kosa dia mampiasa ny Apple Pencil isika, na hanoratantsika, hanoratantsika, hanoratantsika ...
Volavola tokony ho nihatsara
Tamin'ny fizarana teo aloha dia nambarako fa ny fanavaozana ny mini iPad dia toa ny fotoana farany nomen'i Apple ity modely ity, satria hitantsika amin'ny sarin'ity taranaka vaovao ity, ny endriny dia mitovy amin'ny taranaka iPad iPad taloha rehetra, miaraka amin'ny sisiny malala, ambony sy ambany koa.
Raha heverintsika fa ny iPhone XS Max dia manana haben'ny efijery 6,5-inch sy ny iPad Mini 7,9-inch, ity farany ity dia azo atao indroa mitovy habe amin'ny iPhone XS Max. Mazava ho azy, ny fahasamihafana eo amin'ny roa tonta dia tsy azo lavina, ankoatr'izay iPhone dia tsy mifanaraka amin'ny Apple Pencil.
Vidiny mini IPad
Ampio ny haitao farany amin'ny atin'ny mini iPad ankoatry ny fanoloran-tena mifanentana amin'ny Apple Pencil, mitondra fiakaram-bidy.
Ankehitriny ny iPad rehetra mifanentana amin'ny Apple Pencil
Ny tetikadin'i Apple hanaraka dia toa namboarina ampio mifanentana amin'ny Apple Pencil, Hatramin'ny taorian'ny fanavaozana farany, ny iPad rehetra misy amin'ny fantsom-pifandraisana ofisialin'i Apple dia mifanaraka amin'ny Apple Pencil, na dia tsy afaka manararaotra feno azy aza ny maodely sasany.
Toa tsapan'i Apple fa tafiditra ao anatin'izany ny fanohanan'ny stylus amin'ny iPad, tahaka ny nataon'i Samsung tao anatin'ny telo taona lasa, mety indrindra ho an'ny mpampiasa, satria manitatra ny fari-javatra azo atolotra antsika izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » takela-bato » Ireo iPad vaovao ho an'ny taona 2019 avy amin'ny Apple dia antsoina hoe: iPad Air sy iPad mini